မှော်ဘီ အိတ်ချုပ်စက်ရုံမှ ကြိုတင် အသိမပေးဘဲ အလုပ်ထုတ် ခံရသူငါးဦး နို့တစ်ကြေး ရရှိပြီ - Yangon Media Group
မှော်ဘီ အိတ်ချုပ်စက်ရုံမှ ကြိုတင် အသိမပေးဘဲ အလုပ်ထုတ် ခံရသူငါးဦး နို့တစ်ကြေး ရရှိပြီ
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၃
မှော် ဘီမြို့နယ်ရှိ GOLD IMPERE အိတ်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်ထုတ်ခံရသူငါးဦးကို နို့တစ်ကြေးပေးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းစက်ရုံမှအလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်ထုတ်ခံရသူတို့အကြား အ ငြင်းပွားမှုကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်တွင် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းခဲ့ရာ နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ ကြောင်း မှော်ဘီမြို့နယ်အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ‘ညှိနှိုင်းပွဲမှာ ရှင်းပြလိုက်လို့ အလုပ်ရှင်ဘက်က သဘောတူတယ်။ လာတဲ့သူတွေကို ချက်ချင်း ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်”ဟု မှော်ဘီမြို့ နယ် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဦးတင်ထွန်း ကပြောသည်။
မှော်ဘီမြို့နယ် အမှတ်(၄) လမ်းမကြီးနံဘေးရှိ GOLD IM-PERE ကင်မရာအိတ်ချုပ်စက် ရုံမှလုပ်သား ၄၅ ကျော်အား အ လုပ်ရှင်ကမှတ်ပုံတင်အတုဖြင့်အလုပ်ဝင်သည်ဟုဆိုကာ တစ်လကြို တင်အသိမပေးဘဲ အလုပ်မှထုတ် ပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း အ ပေါ် အလုပ်ပြန်လည်ရရှိလို၍မှတ် ပုံတင်အမှန်များဖြင့်ပြန်ဝင်ရောက်လိုကြောင်းပြောကြားသူများအ နက် ၁၇ ဦးအား အလုပ်ပြန်ခန့်ခဲ့ ကြောင်း၊ ကျန် ၂၈ ဦးအနက် ၂၃ ဦးမှာ တခြားအလုပ်ရရှိသွားပြီ ဖြစ်သလို တချို့မှာနေရပ်သို့ ပြန်သွားကြကြောင်း၊ မအိသီရိကျော်ပါ ငါးဦးမှာ မှတ်ပုံတင်အစစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုသော်လည်း အလုပ်ရှင်မှခွင့်မ ပြုတော့၍ နို့တစ်ကြေးရလိုကြောင်း ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ထံ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
”သမီးတို့ကအလုပ်ပြန်လိုချင်တာ အလုပ်ပြန်မရဘူး။ ရတာ ပဲတောင်းမယ်ဆိုပြီး နို့တစ်ကြေး တောင်းတာ အဲဒါရတယ်။ သမီးတို့လာတဲ့သူသုံးဦးကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးပါတယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ဦး အတွက်တော့ လေဘာဦးစီးဆီ မှာပေးထားခဲ့တာတွေ့ပါတယ်။ ဒါကလည်းသမီးတို့ ငါးယောက် တောင်းဆိုလို့ရတာ။ ကျန်တဲ့သူတွေ မပါဘူး။ သူတို့လည်းတောင်းရင်ရမှာပေါ့”ဟု အလုပ်ထုတ်ခံရသူ မအိသီရိကျော်က ပြောသည်။ နို့တစ် ကြေးအဖြစ် တစ်လစာစီရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၇၈ ဦးကို နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဂိတ်၌ လွှဲပြေ??
ကက်တလန်ဒေသ ခွဲထွက်ခွင့်ရလျှင် ဘာစီလိုနာအသင်း လာလီဂါမှ ထွက်ရန် ဆွေးနွေးမည်
ဗန်ဒါဆားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သော ဖာဒီနန် မန်ယူ အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်ရန် နီးစပ်
အင်ဒိုနီးရှား လွမ်ဘုတ်ကျွန်းတွင် ငလျင်လှုပ်၊ ခရီးသွားသုံးဦး သေဆုံး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်
မြောက်ကိုရီးယား ခြိမ်းခြောက်မှုကို ကာကွယ်ရန် တာဝေးပစ် ဒုံးပျံများ ဂျပန် ဝယ်ယူချထားမည်
ဘိုရီဆော့ဗ်နှင့်ပွဲတွင်ခြေစွမ်းပြခဲ့သော အိုဇေးကို နည်းပြအူနိုင်းအမ်မရီချီးကျူး ၊ နောက်ခ??
တိုက်ပွဲတိမ်းရှောင် နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာမှပြည်သူများ နေရပ်ပြန်ရာတွင် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တပ??